လွတ်တဲ့ငါး ကြီးကြီးလား သေးသေးလား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » လွတ်တဲ့ငါး ကြီးကြီးလား သေးသေးလား
လွတ်တဲ့ငါး ကြီးကြီးလား သေးသေးလား
Posted by မမလေး on Nov 8, 2012 in Creative Writing, Think Different | 26 comments
လွတ်တဲ့ငါးက ကြီးကြီးလား သေးသေးလား
ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကို နေ့တိုင်း ကန်စွန်းရွက်ကြော်ကပ်ကပ်နေတဲ့ ဘုန်းကြီးတကည့် ဒကာတစ်ယောက်ရှိတယ်တဲ့ …
တစ်နေ့ ၀က်သားဟင်းလာလှူတဲ့ ဒကာတစ်ယောက်ရောက်လာရောတဲ့ …
ဘုန်းကြီးကလည်း ကန်စွန်းရွက် စားတာငြီးငွေ့လာတော့ လှူသူရှိတုန်း ၀က်သားစားချင်တယ်တဲ့…
အဲ့ဒါကို ဘုန်းကြီးတပည့်ကလည်းသိတယ်တဲ့ … အဲ့ဒါနဲ့ … ကန်စွန်းရွက်ကြော်ကပ်တဲ့ ဒကာရယ် …
၀က်သားချက်ကပ်တဲ့ ဒကာရယ် … နှစ်ယောက်ပြိုင်ပြီး ဘုန်းကြီး တစ်ဖက်တစ်ချက်ကဆွဲတယ်တဲ့ …
ကန်စွန်းရွက်အလှူရှင်က လက်လုပ်လက်သားဆိုတော့ အားရှိတာပေါ့ … ၀က်သားချက်
လှူသူလေးကတော့ သူဌေးသားဆိုတော့ အားသိပ်မရှိဘူးပေါ့ …
ဒါပေမယ့် ဘုန်းကြီးက ၀က်သားစားချင်တော့ ၀က်သားချက်အလှူရှင်ဘက်ကို လိုက်လိုက်သွားတယ်တဲ့ …
အဲ့ဒါနဲ့ အမြဲတမ်းဆွမ်းကပ်နေကြ ကန်းစွန်းရွက်အလှူရှင်က နောက်ဆုံးကျတော့ သိသွားပြီး
ဘုန်းကြီးကို နောက်နေ့က စလို့ ကန်စွန်းရွက်ကြော်ပြီးမကပ်တော့ဘူးတဲ့ … ဘုန်းကြီးလည်း
အဲ့နေ့ကစပြီး နောင်တတွေရလို့ပေါ့ … ဟိုက ၀က်သားချက်ကို တစ်ရက်ပဲကပ်တာလေ …
ပြောချင်တာကတော့ … နေ့တစ်ဒူဝ လုပ်နေကြအရာက ပိုကောင်းပါတယ် …
အချစ်ဆိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲ … ချစ်ရဲ့သားနဲ့ ငြီးငွေ့ပြီး အသစ်ရှာချင်သူတွေအတွက် သာဓကကောင်းလေးပေါ့ … ကိုယ့်အပေါ်ကောင်းသူကို လျစ်လျူမရှုပါနဲ့ … တစ်နေ့နောင်တရမှာအသေအချာပါပဲ …
သူငယ်ချင်းဆိုလည်း ဒီလိုပါပဲ … ကိုယ့်အပေါ် နှစ်ပေါင်းများစွာ အနစ်နာခံတူတူပေါင်းလာခဲ့တာတွေမေ့ပြီး … အပေါ်ယံသာပေါင်းတတ်တဲ့ သာပေါင်းညာစားတွေနောက် သိသိကြီးနဲ့ လိုက်မသွားမိကြဖို့ ပြောချင်တာပါ … ဒါပေမယ့် ..့ ဘုန်းကြီးပြောသလို … ပျက်ချိန်တန်ရင် မကောင်းတာကို အကောင်းထင်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ … အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့် … ဆရာကြီးလုပ်တာမဟုတ်ရပါ … စဉ်းစားမိလို့ပါ …
has written 129 post in this Website..
View all posts by မမလေး →
ကိုယ်လက်ထဲမှာမိနေတဲ့ ငါးသေးသေးလေးလောက်မှ တန်ဖိုးမရှိနိုင်ပါဘူး
အဲဒါကြောင့် လွတ်မသွားစေရန် ဘီလူးစီး ကျားစီး အင်တိုက်အားတိုက်
ပိုက်ကွန်အကြီးစားများ ခေတ်မှိလက်နက် ကိရိယာ တန်ဆာပလာများဖြင့်
ဖမ်းယူ ကြပါရန် ကမ္ဘာရေလုပ်ငန်း ၀န်ကြီးဌာန မှထုတ်ပြန်ထားပါကြောင်း
အသားမကြိုက်လို့ ကန်စွန်းရွက်ဘက်ကိုပဲ ဆက်လိုက်မယ်
တခဏတာ သာယာမှုအတွက် စိတ်ယိမ်းယိုင်မိလို့ ရှိနေတဲ့အခွင့်အရေးလေးတောင်
အချစ်မှာတော့ အသစ်မရှာပါဘူး…ရိုးမြေကျ တစ်ယောက်ဆို တစ်ယောက်ပါပဲ…
( အရိုးမြေကျတဲ့အထိ ကိုယ့်ဟာကိုယ်တစ်ယောက်ထဲလို့ပြောတာ..ဟိ.. )
Khaing Zar Win says:
လွတ်တဲ့ ငါးကြီးရတယ်ကိုမရှိပါဘူး မမလေးရယ်။
ကြီးတဲ့ ငါးတွေပဲ လွတ်လွတ်သွားတာရယ်။
ကျနော့မှာလည်း အလွန်တန်ဖိုးထားရပါသော ချစ်သူငယ်ချင်း အရင်းခေါက်ခေါက်တွေ ၁၅ ယောက်ကြီးများရှိပါတယ်။
ပေါင်းလာတဲ့သက်တမ်းက လည်း ၁၁ နှစ်ရှိပြီဗျိုး။ အဲ့ဒီ နှစ်တွေကို တန်ဖိုးထားတာ တူလို့ပဲ ဒီအချိန်ထိ မြဲတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
၂၀၁၂ ရဲဝင်း says:
မူရင်းမှာ ကန်စွန်းမဟုတ်ဘူး ချဉ်ပေါင်…
အဲ့လို ချဉ်ပေါင်နဲ့ ၀က်သား ဘုန်းကြီးကို
နောက်ဆုံး ချဉ်ပေါင် တကာက …
စာချိုးလေးနဲ့ ဆွဲနေရာကနေ ရုတ်တရက်
လွှတ်ပေးလိုက်လို့ ၀က်သားဒကာ နဲ့ ဘုန်းကြီး
‘ချဉ်ပေါင်ကို ခြေကန်၊ ၀က်သားနောက် စုံကန်ရုန်း၊ သွားတော့ကတုံး’
ကျုပ်တို့ဆီမတော့… ချဉ်ပေါင်ကပိုဈေးကြီးတာ… သေချာတယ်..
ဟိုတခါပြောတဲ့.. ကုလားပြည်ကလာတဲ့.. ချဉ်ပေါင်ပုလင်းတွေက.. မဆလာတွေပါတယ်ဗျ..
အာ့ဆို…’ချဉ်ပေါင်သနပ်’ ပဲဖြစ်မယ်…(သရက်သီးသနပ် မဆလာပါသလို)
“ချဉ်ပေါင်ကို ခြေကန်ရုန်း သွားတော့ကတုံး”…
Mon Kit says:
မှတ်သားစရာ အကြံပေး ပို့စ်လေးပါ….
jullies cezer says:
မတူသော အတွေးနဲ့ ၀င်မန့်ရရင်တော့ အမြဲတမ်းစားနေရတဲ့ ကန်စွန်းရွက်/ချဉ်မောင်ရွက်နေရာမှာ
တခါတရံသာ အစားထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့ ၀က်သားဟင်းကို တပ်မက်မိတဲ့ ကိုယ်တော်ကို အပြစ်မတင်သင့်ပါဝူး။
သူလဲ ပုထု ဇဉ်ဘဲလေ။ ကန်စွန်း/ချဉ်မောင် ဒကာအနေနဲ့ ကိုယ်တော်ရဲ့ ဆန်ဒကို နားလည်ပေးရမှာဘာ။
ကိုကပ်တဲ့ဆွမ်းတရက်မစားလို့ နောက်မကပ်တော့ဝူးဆိုတာတော့ ခလေးဆန်လွန်းဘာဒယ်ဗျာ။
ဟိုက တရက်တလေကပ်မဲ့ ၀က်သားကို တရက်တလေ ဦးစားမပေးလိုက်ချင်လို့ ကိုတသက်လုံး ကပ်လာတဲ့ ကုသိုလ်အမှုတွေ သဲထဲရေသွန်မဖြစ်ဖူးလားလို့။ :harr:
Thu Wai says:
တေးတေးရေးပဲရား :harr: ကြီးကြီးရား :harr: ကြီးကြီးတေးတေးရား :hee:
ဘာလာလာ ဆိုပေမယ့် ..
သားသားဂဒေါ့ မည်းမည်းဂျီး ယူနိုင်ဘူးနော့ ..
အိမ်မှုကိစ္စနိုင်တဲ့ ချွေးမ ချောချောလေး ချာထားပေး ..
ဒါဗျဲ .. ပြောမယ် ..
လူ့သဘာဝ လူတွေဖြစ်တတ်တဲ့ အကျင့်စရိုက်လေးကို ဖော်ပြထားတာပါ ……
အဲ့လို ဒဂါဂျီးဒွေဂိုလက်လွတ်မှာစိုးလို့ အိမ်မကြွဘဲ ပို့ဆွမ်းလေးပဲစောင့်ရင်း အပျိုဂျီးဖစ်… အဲလေ ဟုတ်ပါဘူး
ရွာသူ jujuma . says:
” ချင် ” စိတ်ကလေးကို ရှေ့တန်းတင်မိလို့ …
” နောင်တ” ဆိုတာ ဖြစ်လာ စမြဲ ပေါ့လေ …
ချာကြီး လုပ်ကြည့်ဒါ .. :hee:
ဒါပေမယ့် လည်း ဒါပေမယ့် ပေါ့လေ…။
မျှတအောင် ရိုးရိုးသားသားပြောပြီး လုပ်ခဲ့ရင်ပြဿနာငြိမ်းပါတယ်။
“ငါ့ဒကာ မင်းက နေ့တိုင်းဆွမ်းကပ်ခွင့် ကြုံပါတယ်
ဒီတစ်ရက်တော့ ဟိုဒကာကို အလှည့်လေးပေးလိုက်ပါကွယ်”
လို့ ဆိုလိုက်ရင် ပြီးရောဗျာ။
ဒါလေးတောင် မဖြေရှင်းတတ် ငတ်မှာပေါ့ဗျာ။
အကြောင်းရာက ငါးကင်တွေ့ဘာကိုပြစ် ဆိုလား အဲ့သည်သဘောဆောင်နေသလားဘဲ
ဘုန်းဂျီးဂို ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲလှူမယ်ဆိုပြီး စိတ်ထားပြီးသူများလှူတာမကြိုက်တာကလည်းဟုတ်သေးဘူး
နောက်တစ်ခုက ကိုယ်ကသူများထက် ကောင်းကောင်းလှူနိုင်တာကို ကောင်းကောင်းမလှူနိုင်သူတွေကို
လက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ ငှက်ပျောသီးနှစ်လုံးမကိုင်နဲ့ဟေ့ မကိုင်နဲ့ :msd:
မမလေးကို ဦးကြောင် ခြစ်တယ်။ ဂေါင်ဇူးလေးကိုလည်း ဦးကြောင် မေတ္တာရှိတယ်။ ကြီးကြီးသေးသေး ခြစ်တယ်ကွာ။ ငါးကြော်မကြိုက် ကြောင်မိုက်အဖြစ်တော့ မခံဘူး.. ခြစ်တယ်ဟေ့ မမလေးဂေါင်ဇူးကို….. :harr:
ဒီပိုစ့်အရကြည့်လျှင် …ကန်စွန်းရွက်အလှူရှင် စေတနာမမှန်ဘူးလို့ ပဲ မြင်မိပါတယ် ။
ကိုယ်လှူနေကြ ဘုန်းကြီး ၊ တရက်တစ်လေလေး ၀က်သားစားပါစေတော့ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ငါကတော့ နေ့တိုင်းလှူနေလို့ ကုသိုလ်ရတာပဲ .. သူ့ခမျာ တရက်စာလောက်တော့ ကုသိုလ်ယူပါစေဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးထားပေးနိုင်လျှင် အရမ်းအေးချမ်းမှာပဲ … ။ ကိုယ်တိုင်လည်း တရက်စာဖြစ်ဖြစ်တောင် ၀က်သားမလှူနိုင်ပဲ …. အလှူအပေါ် စိတ်ခုသွားပြီးနောက်ဆုံးမလှူတော့တာကတော့ …. စိတ်ဓါတ်သေးသိမ်သလိုမြင်မိပါတယ် ။
Green Rose says:
အင်း.. ဒီအတိုင်း ပုံပြင်လို့ပဲ မှတ်လိုက်ရင်တော့ ဘာမှမဖြစ်ပေမယ့် တကယ်သာဆိုရင်လို့ စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင် အဲဒီ့ဘုန်းကြီးရော၊ ဒကာ ၂ ယောက်ရော ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တွေမဟုတ်ကြဘူး လို့ထင်ပါတယ်။
နောက်တစ်မျိုး စဉ်းစားကြည့်ရင်လည်း စစ်မှန်ခြင်း၊ မစစ်မှန်ခြင်းဆိုတာကို အချိ်န်ကာလနဲ့ တိုင်းတာဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးထင်ပါတယ်။ အရေးကြုံလာတဲ့အခါ ကိုယ့်အတွက် ဘယ်သူ မှန်ကန်စွာရပ်တည် ဖြေရှင်းပေးမလဲ ဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ ကိုယ့်အတွက် ဘယ်သူ ဘယ်လောက် အနစ်နာခံနိုင်မလဲ ဆိုတဲ့အပေါ်မှာ မူတည်တယ်လို့ Green Rose ယူဆပါတယ်။
မလေးကြားဖူးတာ နဲ့ မလေးရဲ့ ဆိုလိုရင်း အဓိပ္ပါယ်က အများကြီးသွေဖီနေသလိုပဲ။ နှိုင်းပြထားတာ ကွာဟမှုတွေရှိနေတယ်လို့ တော့ ထင်မိပါတယ်။
အဲဒါလေးကို ဥပမာပြုပြီး အိမ်ထောင်ရှိသူတွေအတွက် ဆက်ရေးရရင်တော့
အိမ်မှာနေ့ တိုင်းစားရတဲ့ ဟာ (ထမင်းတို့ ဟင်းတို့ ပေါ့) ကို ငြီးငွေ့ တယ်ဆိုပြီး ၊ အပြင်ထွက် ဝယ်မစားနဲ့ ပေါ့
တော်ကြာနေ အိမ်က သိသွားလို့အကုန်ငတ်ကုန်မယ်ပေါ့
အိမ်ရှင်မတွေလဲ ၊ အိမ်ကလူခရီးထွက်လို့ ဆိုပြီး ဧည့်သည်ခေါ်မကျွေးနဲ့ ပေါ့ (ထမင်းတို့ ဟင်းတို့ ပြောပါတယ်)
တော်ကြာ အိမ်ကလူ သိသွားရင် ၊ မစားတော့ရင် ဒုတ်ခ
aye.kk on ၀ိတ်ထိန်းနည်း 